Ukumkelwa kwabafundi beekholeji zeBloomfield: Izikolo ze-SAT, I-Admit Rate
Iimviwo zeeKholeji zaseBloomfield.
Phantse kubini kwisithathu kubafakizicelo bayamkelwa eBloomfield ngamnye ngonyaka; abafundi abanamabanga amahle kunye namanqaku okuvavanya banokungeniswa. Ukufaka isicelo, abafundi abaza kufuneka ukuba bafake isicelo, iimpendulo zesikolo esiphakamileyo, amanqaku okuvavanya ngokulinganayo, iincwadi zokucebisa kunye nesicatshulwa somntu. Abafundi bangafaka isicelo kunye nesicelo esiqhelekileyo.
Imali yokwamkelwa kweekholeji yaseBloomfield: 62%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 390/460
ISAT Math: 380/490
EColomfield College Inkcazo:
Eyasungulwa ngowe-1868, iBholeji yaseBloomfield yiminyaka emine, isikolo sePresbyterian esise-Bloomfield, eNew Jersey, iililesi ezili-15 kuphela ngaphandle kweSixeko saseNew York. Ngomlinganiselo wabafundi / ubuchule be-16 ukuya ku-1 kunye nobukhulu bemilinganiselo yeklasi ye-16, aba-2 100 bezidanga-mva bafumana imfundiso eninzi evela kubafundisi babo. I-Bloomfield ineprojekthi yokunonyamekela ngokukodwa, eyagunyaziwe yiKomishoni kwiMfundo yoLondolozo lweeNzululwazi kunye neBhodi yeNew Jersey yaseNew Jersey. Ubugcisa kunye nezenzululwazi zentlalo nazo zixhaphake kakhulu phakathi kwezifundo zakudala. Ikholeji igubungela amaqela angama-47 kunye nemibutho equka ama-14 ama-fraternity and sororities.
Kwi-front yezemidlalo, iBloomfield ilungu leNkcazo ye-NCAA II i- Central Atlantic Collegiate Conference kwaye ibanjelwe kwiindidi zamadoda, amabhinqa kunye nemidlalo yangaphakathi. Ikholeji liyaziqhenyisa ngolobuchwepheshe bayo, kunye nomfundi ngamnye onokwakhe "indawo yokusebenzela yangasese" kwintanethi yekholejini, esetyenziselwa ukudala nokujika.
Ubhaliso lwabonke: 1,996 (i-1,995 izifundo zakudala)
Isifundo kunye neMali: i-$ 28,600
Igumbi neBhodi: i-$ 11,500
Ezinye iindleko: $ 3,146
Iindleko ezipheleleyo: $ 44,546
Uncedo lwezeMali kwiColomfield College (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 23,045
Imali: $ 6,065
Ulawulo lwezoShishino, iMfundo, isiNgesi, uLondolozi, i-Psychology, i-Socialology, i-Visual and Performing Arts
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 65%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka-4: i-12%
Izinga lokuQinyezelwa kweNyaka-6: i-31%
Ukuba Uthanda Ikholeji yaseBloomfield, Unokuthi Ungathanda Ezi Zikolo:
Abafake izicelo abanomdla kwisikolo esincinci esiseNew Jersey kufuneka baqwalasele izinto ezifana neYunivesithi yeNkundla YeeGeorgia , iFelician College , iYunivesithi yaseCaldwell kunye neYunivesithi yase-Centenary .
Ezinye iikholeji kwiNgqungquthela yase-Central Atlantic Collegiate ziquka iYunivesithi yasePost, iYunivesithi yaseFiladelphia , iChestnut Hill College kunye neYunivesithi yaseNtlalontle . Ezi zikolo ziphela kufuphi neNew Jersey (eNew York, ePennsylvania, Connecticut, naseDelaware), kwaye zifana nobukhulu kunye nokufikeleleka.
IYunivesithi yaseTennessee Admissions
I-Connecticut Connecticut University Admissions
Uvavanyo lweBetty Wilson lokuhlaselwa - Huntsville 1992